Ukunamathela ezintsha, ukugcina isantya kunye Times, ukufuna umoya ogqibeleleyo lweshishini MAXIMA yenza iinzame ezinkulu ukuhlangabezana neemfuno zabathengi kunye ezintsha rhoqo, rhoqo ngaphaya. UMAXIMA ebesebenza ekuphuculeni uMsebenzi oMninzi weeNgcingo ezingenazingcingo ngeKholomu ...
Kwi-2018 Automechanika Frankfurt, intengiso yanamhlanje ekhokelela kurhwebo lweshishini leemoto, iMIT AUTOMOBILE SERVICE CO, LTD (MAXIMA), ebekwe kwiHolo 8.0 J17, ubungakanani bokuma: 91 sqm. yazisa iimveliso ezikrelekrele ezinomthwalo onzima, ivula indawo entsha yePlatform Lif ...
Ukuphakanyiswa kweQonga eliLukhuni, thelekisa nokuphakamisa iikholamu eziSelfowuni, kunokuvumela ukuhamba ngokukhawuleza nokucima. Uninzi lwemisebenzi kwisithuthi sentengiso luvavanyo kunye nolondolozo olulula, ekufuneka ligqitywe ngokukhawuleza. Ngokuphakamisa iqonga, umqhubi unokujongana nale misebenzi ngokufanelekileyo, enokugcina ...